Madaxweynaha oo ka qeybgalay furitaanka garoonka Bosaaso-Sawirro – Radio Muqdisho
Madaxweynaha oo ka qeybgalay furitaanka garoonka Bosaaso-Sawirro
Waxaa ka soo qeyb galay munaasabadda wafdi ka socday dowladda Soomaaliya oo uu hogaaminayo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamauud,madaxda Puntland, beesha caalamka,safiirada dalalka Talyaaniga, Shiinaha ,raysal wasaarayaashii hore ee Soomaaliya, Boqorka , Nabadoono, siyaasiyiin, culimo’udiin, dhalinyaro,haween, ganacsato, qurbajoog, warbaahinta , iyo iyo marti sharaf aad u fara badan.
Munaasabaddan ayaa ah mid weyn oo taariikhi, taasi oo baal weyn ka geli doonto taariikaha Soomaaliya.
Wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda Soomaaliya Mudane Cali Axmed Jaamac Jangeli oo munaasabadda mas’uuliyiintii ka hadashay kamid ahaa ayaa u hambalyeeyay dowladd goboleedka Puntland guusha ay ka gaareen mashruuca dib u dhiska garoonka diyaaradaha ee magaalada Bosaaso.
Safiirka dalka Shiinaha u fadhiya Soomaaliya,Wei Hongtian ayaa munaasabadda furitaan garoonka diyaaradaha magaalada Bosaaso ka sheegay in dowladda Shiinaha ay ka go’an tahay maagashi in ay ku sameysay guud ahaan qaaradda Afrika isla markaana Soomaaliya mashaariicdaasi ay ka faa’ideysan doono.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland C/weli Maxamed Cali Gaas ayaa u mahadceliyay dowladaha gacanta ka geystay dhismaha garoonka diyaaradaha ee Bosaaso.
Xigasho sawirada : Horseedmedia
War Saxaafadeed – Galmudug oo canbaareysay tagista Jawaari ee Dhuusamareeb
Guddiga waalidiinta Caabudwaaq oo baaq u jeediyay mamulka waxbarashada Degmada “SAWIRRO”